FIFA 19 အတွက် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ မန်ယူဂျာစီကို ပရိသတ်တွေ လှောင်ပြောင်နေပြီ
ကျားသစ်ရေ ဒီဇိုင်းနဲ့ မန်ယူအသင်းရဲ့ စတုတ္ထမြောက်ဂျာစီကို ပရိသတ်တွေ လှောင်ပြောင်နေကြပြီ
30 Nov 2018 . 5:06 PM
မန်ယူအသင်းဟာ စတုတ္ထမြောက်ဂျာစီဖြစ်တဲ့ ကျားသစ်အရေခွံ ဒီဇိုင်းနဲ့ဂျာစီကို (၆၅)ပေါင်နဲ့ ဈေးကွက်ထဲ စတင်ရောင်းချနေပြီဖြစ်ပြီး အဲဒီဂျာစီဒီဇိုင်းကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာ လှောင်ပြောင်ဝေဖန်မှုတွေ ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ မန်ယူအသင်းဟာ အဲဒီဂျာစီကို အပြင်မှာ ၀တ်ဆင်ဖို့ မဟုတ်ဘဲ FIFA 19 ဂိမ်းထဲက Ultimate Team mode မှာ ထည့်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ မန်ယူအသင်းနဲ့အတူ ဥရောပထိပ်သီးအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ ရီးယဲလ်၊ ဂျူဗင်တပ်စ်၊ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းတွေကလည်း FIFA 19 အတွက် စတုတ္ထမြောက်ဂျာစီတွေ တီထွင်ခဲ့ပြီး ဈေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းချသွားမှာပါ။
ဒါပေမဲ့ မန်ယူအသင်း ဂျာစီဒီဇိုင်းက တခြားအသင်းတွေထက် ပိုထူးခြားနေပြီး ကြည့်ရတာအဆင်မပြေလို့ ပရိသတ်တွေက လှောင်ပြောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Twitter အသုံးပြုသူတစ်ဦးက “နေပါဦး၊ ဒီဂျာစီကို သူတို့ အပြင်မှာ တကယ်ဝတ်ကြမှာလား ” လို့ ရေးသားခဲ့သလို၊ နောက်တစ်ယောက်ကလည်း ” ဒီအင်္ကျီကိုသာ ၀တ်သွားရင် ချီတာ(ကျားသစ်)တွေ ကျွန်တော့်နောက်ကို လိုက်လာမှာပဲ”လို့ လှောင်ပြောင်ရေးသားခဲ့တယ်။ ပရိသတ်ကြီးရော . . မန်ယူအသင်းဂျာစီ ဒီဇိုင်းကိုကြည့်ပြီး ဘာများပြောချင်ပါသေးလဲ . . .
ကြားသဈရေ ဒီဇိုငျးနဲ့ မနျယူအသငျးရဲ့ စတုတ်ထမွောကျဂြာစီကို ပရိသတျတှေ လှောငျပွောငျနကွေပွီ
မနျယူအသငျးဟာ စတုတ်ထမွောကျဂြာစီဖွဈတဲ့ ကြားသဈအရခှေံ ဒီဇိုငျးနဲ့ဂြာစီကို (၆၅)ပေါငျနဲ့ ဈေးကှကျထဲ စတငျရောငျးခနြပွေီဖွဈပွီး အဲဒီဂြာစီဒီဇိုငျးကို လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှမှော လှောငျပွောငျဝဖေနျမှုတှေ ပွုလုပျနကွေပါတယျ။ မနျယူအသငျးဟာ အဲဒီဂြာစီကို အပွငျမှာ ဝတျဆငျဖို့ မဟုတျဘဲ FIFA 19 ဂိမျးထဲက Ultimate Team mode မှာ ထညျ့သှငျးမှာဖွဈပါတယျ။ မနျယူအသငျးနဲ့အတူ ဥရောပထိပျသီးအသငျးတှဖွေဈတဲ့ ရီးယဲလျ၊ ဂြူဗငျတပျဈ၊ ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးတှကေလညျး FIFA 19 အတှကျ စတုတ်ထမွောကျဂြာစီတှေ တီထှငျခဲ့ပွီး ဈေးကှကျထဲမှာ ရောငျးခသြှားမှာပါ။
ဒါပမေဲ့ မနျယူအသငျး ဂြာစီဒီဇိုငျးက တခွားအသငျးတှထေကျ ပိုထူးခွားနပွေီး ကွညျ့ရတာအဆငျမပွလေို့ ပရိသတျတှကေ လှောငျပွောငျနကွေတာဖွဈပါတယျ။ Twitter အသုံးပွုသူတဈဦးက “နပေါဦး၊ ဒီဂြာစီကို သူတို့ အပွငျမှာ တကယျဝတျကွမှာလား ” လို့ ရေးသားခဲ့သလို၊ နောကျတဈယောကျကလညျး ” ဒီအင်ျကြီကိုသာ ဝတျသှားရငျ ခြီတာ(ကြားသဈ)တှေ ကြှနျတေျာ့နောကျကို လိုကျလာမှာပဲ”လို့ လှောငျပွောငျရေးသားခဲ့တယျ။ ပရိသတျကွီးရော . . မနျယူအသငျးဂြာစီ ဒီဇိုငျးကိုကွညျ့ပွီး ဘာမြားပွောခငျြပါသေးလဲ . . .